LG na-ezube imechi nkewa mkpanaka n'ihi enweghị ndị na-azụ ahịa | Gam akporosis
LG na-ezube imechi nkewa mkpanaka n'ihi enweghị ndị na-azụ ya
Ignacio Lopez | 23/03/2021 12:00 | LG
Anyị na-ekwu okwu ruo ọtụtụ ọnwa maka atụmatụ ọdịnihu nke ụlọ ọrụ Korea LG, ụlọ ọrụ siri ike na Jenụwarị hụtara na ọdịnihu ya n'ụwa nke ekwentị mkpanaaka mybọchị m gwụrụ. Fewbọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, asịrị rutere nke gosipụtara ya Vingroup dị ka otu n'ime ndị nwere ike ịzụ ya.
Vingroup bụ otu ụlọ ọrụ ahụ afọ ole na ole gara aga zụtara ụlọ ọrụ Spanish BQ wee hapụ ya na akara aka ya, yana ndị ọrụ niile tụkwasịrị ya obi ruo oge ahụ. Akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na Korea na-egosi na, na enweghị ndị na-azụ ahịa, LG nwere ike mechie nkewa mkpanaka.
Azụmahịa LG nọ na-acha uhie uhie kemgbe 2015 ma taa gbakọtara ihe karịrị ijeri $ 4.500 ijeri na-efu. Dabere na otu onye metụtara ụlọ ọrụ ahụ nke họọrọ ịghara ikpughe aha ya:
LG na ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere mkparịta ụka gbasara ire ụlọ a, mana ọ dị ka mkparịta ụka agabigabeghị nke ọma. Odi ka ire ahia ahia ya dika o siri ike n’oge a, dika odi ire ere.
LG ghọrọ onye nke atọ kachasị ama ama na ụwa, mana ọbịbịa nke ụlọ ọrụ ndị Asia na enweghị ike ịchọta ọdịiche dị n'etiti Apple na Samsung, ụlọ ọrụ a na-ada nke ihu ọma ruo oge ọ na-ugbu a guzo.
Ere nke LG nkewa agunyeghi patentMa ọ bụghị ya, ọtụtụ ga-abụ ụlọ ọrụ ga-enwe mmasị iweghara akụ ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ Korea.
Ọzọkwa, ọ ga-abụ nhọrọ magburu onwe ya maka onye ọ bụla ama ama ama chọrọ tinye ahia US, Ahịa ebe ụlọ ọrụ nwere òkè gburugburu 9%, ọ bụ ezie na ọnwa ole na ole gara aga ọ bụ 15%.
La LG na-ekere òkè na 2020 Ọ bụ naanị 2% dị ka ụmụ okorobịa si Counterpoint Research, ịbụ onye nke itoolu na-ere ekwentị na ụwa mgbe ere 4,7 nde smartphones, 13% na-erughị n'otu oge nke 2019.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG na-ezube imechi nkewa mkpanaka n'ihi enweghị ndị na-azụ ya
Ezuru ekwentị m. Gịnị ka m kwesịrị ịme?
Ngwa 10 kachasị mma maka dub vidiyo na gam akporo